အလှောင်ခံဘဝမှ ဂန္ထဝင်အဖြစ်သို့ . . . The Story of Didier Drogba - SPORTS MYANMAR
By Edi Tor April 26, 2020
အပိုင်း ( ၁ ) – နိဒါန်း
ပရိသတ် ၆ သောင်းကျော် ရှိနေတဲ့ ဂျာမဏီ နိုင်ငံ မြူးနစ်မြို့က အလိုင်းရန့် အရီနာ ကွင်းကြီးထဲမှာ အပ်ကျသံ မကြားရလောက်အောင် တိတ်ဆိတ်လို့ နေပါတယ် ။ ချဲလ်ဆီး အသင်းက ပဥ္စမမြောက်ပင်နယ်တီကို ကန်သွင်း တော့မှာဖြစ်ပြီး ဂိုးဝင်သွားရင် ၂၀၁၂ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားကြီးကို ရယူ ပိုင်ဆိုင်နိုင်တော့မှာပါ ။ ကွင်းထဲက ပရိသတ်တွေရော ရုပ်သံဖန်သားပြင်ကို ကြည့်ရှုနေကြသူတွေပါ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်တုန်းကလို အိပ်မက်ဆိုးကြီးကို ပြန်မမြင်မက်စေဖို့ အပြင်းအထန် ဆုတောင်း နေခဲ့ကြပါတယ် ။ မော်စကို မှာတုန်းက ဒီလို အသာရနေမှု ကို လွဲချော်ပြီး သူတို့ အရေးနိမ့်ခဲ့ပါတယ် ။ အခုတစ်ခေါက်ရော ဘယ်လိုလဲ ?
ဒါဟာ ဘောလုံးသမား တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝအတွက် အရေးအကြီးဆုံး အခိုက်အတန့်လို့ ဆိုရမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် ဒီဒီယာ ဒရော့ဘာ ကတော့ အေးအေးဆေးဆေး ဖြစ်နေပါတယ် ။ သူ ရင်ဆိုင် ကျော်ဖြတ်ရမှာက ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ မန်နျူရယ် နူအာ ပါ ။ ဆီမီးဖိုင်နယ် တုန်းက ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ၊ ကာကာ တို့ရဲ့ ပင်နယ်တီတွေကို ကာကွယ်ခဲ့တဲ့သူပါ ။
“ဘောလုံး ကန်ဖို့ လှမ်းလာချိန်မှာ ကျွန်တော့ကိုယ် ကျွန်တော် ပြောနေမိပါတယ် ။ ဒီစကားက ဟိုးငယ်ငယ်လေးတည်းက ကျွန်တော့ကိုယ်ကျွန်တော် အမြဲလိုလို ပြောနေခဲ့တဲ့ စကားတွေပါ ။ ကိုယ်ဟာ ဒီလို အရေးပါတဲ့ အခိုက်အတန့် ပေါ်ကို ရောက်နေပြီ ၊ မင်းဂိုးဝင်ရင် နိုင်မယ် ၊ ဂိုးမဝင်ရင် ရှုံးသွားမယ် ဆိုတာမျိုးပါ ။ ဒီလို တာဝန်ယူရတာမျိုးကို ကျွန်တော် အရမ်း နှစ်သက်ပါတယ်”
“ပင်နယ်တီ ဆိုတာက လွဲတတ်တာ ပါပဲ ။ ကျွန်တော်လည်း ပင်နယ်တီ လွဲဖူးပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ၀င်တဲ့ အလုံးကတော့ ပိုများပါတယ် ။ ပင်နယ်တီ ကန်ကြပြီဆိုရင် ဂိုးသမား ပုတ်ထုတ်မိတာထက် ဂိုးဝင်သွားတာက ပိုပြီးများပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က အပေါ်စီးက ကန်ရမှာပါ”
“ပြီးတော့ ကျွန်တော့စိတ်ထဲ ခံစားနေမိတာလည်း ရှိနေပါတယ် ။ ဒီလိုဖြစ်ဖို့ သတ်မှတ် ထားပြီးသား ၊ ချဲလ်ဆီး ဗိုလ်စွဲရမယ်လို့ ကံကြမ္မာက ဖန်တီးထားပြီးသားလို့ စိတ်ထဲမှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ စွဲမြဲနေပါတယ် ။ အချို့နေ့တွေ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ဖိအားဝင်ကောင်း ၀င်နေမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီနေ့ ကတော့ ကျွန်တော် လုံးဝ အေးဆေးပါပဲ” လို့ ဒရော့ဘာ က သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိထဲမှာ ထည့်သွင်းရေးသား သွားခဲ့ပါတယ် ။
တကယ်တမ်းမှာလည်း ဒရော့ဘာ ဟာ ချဲလ်ဆီးရဲ့ ပဥ္စမမြောက် ပင်နယ်တီကို တည်ငြိမ်မှု အပြည့်နဲ့ ကန်သွင်းခဲ့ပါတယ် ။ ပုံမှန်ကန်နေကျမျိုးမဟုတ်ဘဲ ခြေလှမ်း ၂ လှမ်းသာ အားယူခဲ့တာကလည်း ပင်နယ်တီ အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်လာတဲ့ နူအာ ကို ဝေခွဲမရဖြစ်စေခဲ့ ပါတယ် ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒရော့့ဘာဟာ ဂျာမန်သားကြီးကို ဆုံးဖြတ်ချက်မှားစေခဲ့ပြီး ဘောလုံးဝင်လာတဲ့ ဘက်မဟုတ်တဲ့ ဆီကို ဒိုင်ဗင်ပစ် စေခဲ့ပါတယ် ။
ဂိုးဝင်သွားတယ် ၊ ပွဲပြီးသွားပြီ ၊ ချဲလ်ဆီးတို့ ချန်ပီယံလိဂ် မှာ ဗိုလ်စွဲခဲ့ ပါပြီ ။ ဒါဟာ စတမ်းဖိုဒ့် ဘရစ် ကို ရောက်လာတဲ့ ၈ နှစ် ကာလအတွင်းမှာ ဒရော့ဘာအတွက် အမြင့်ဆုံး အောင်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ အားလုံးဟာ အဆုံးအဖြတ် ပင်နယ်တီ သူရဲကောင်းကို ၀ိုင်းဝန်းပွေ့ဖက်ပြီး ချီးကျုးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို အနေအထားမျိုးကို လွယ်လွယ်နဲ့ ရခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး ။
တစ်ချိန်တုန်းက ဒီဒီယာ ဒရော့ဘာ ဆိုတဲ့ တိုက်စစ်မှုး ဟာ စတမ်းဖိုဒ့် ဘရစ် ပရိသတ်တွေရဲ့ လှောင်ပြောင်စရာ လူသား တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ် . . . . .
အခန်း ( ၂ ) လန်ဒန်ရောက် အသည်းကွဲ အိုင်ဗရီကိုစ့်သားတစ်ယောက်
ချဲလ်ဆီးရဲ့ ဂန္ထဝင် ကစားသမားကြီး ဖြစ်လာခဲ့သူဟာ ချဲလ်ဆီးကို ပြောင်းရလို့ စိတ်ပျက်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ အဲ့ဒီလူကတော့ ဒီဒီယာ ဒရော့ဘာ ပါပဲ ။ အဲ့ဒီ အချိန်တုန်းက ဒရော့ဘာ ဟာ သူ့ရဲ့ ကံကြမ္မာလမ်းကြောင်းကို မမြင်နိုင်ခဲ့သလို ဒါတွေဟာ နောက်ထပ် ၈ နှစ်အကြာမှာ ပါနန်ကာ ပင်နယ်တီနဲ့ ချန်ပီယံဆုကို ရယူပေးဖို့ အကြောင်းတရား ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်း မသိနိုင်ခဲ့ပါဘူး ။
“ချဲလ်ဆီး ကို ပြောင်းရတော့မယ်လို့ သိရတုန်းက ၀မ်းနည်းလွန်းလို့ ကျွန်တော် ငိုခဲ့ရ ပါတယ် ။ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ် ချုပ်ထားတာ ရက်ပိုင်းပဲ ရှိသေးပါတယ် ။ ကျွန်တော့ နှလုံးသားကို ဓါးနဲ့ ထိုးခံလိုက်ရ သလိုပါပဲ ။ မာဆေး ကနေ ကျွန်တော် ထွက်မသွားချင်ခဲ့ပါဘူး ။ ချဲလ်ဆီး နဲ့ စာချုပ်ဖို့ကို ကျွန်တော် မနှစ်မြို့ခဲ့ပါဘူး ။ ကြားရတာ ထူးဆန်းစရာပါပဲ ၊ ဒါပေမယ့် အဲ့တုန်းက ကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတာက ဒီအတိုင်းပါပဲ” လို့ ဒရော့ဘာ က ဆိုခဲ့ ပါတယ် ။
စပါယ်ရှယ်ဝမ်း လို့ ကြွေးကျော်ခဲ့တဲ့ မော်ရင်ဟို ချေဲလ်ဆီးနည်းပြဖြစ်လာမှုဟာ ဒရော့ဘာ ကို လန်ဒန်မြို့တော်ကြီးဆီ ခေါ်ဆောင်ဖို့ ဖြစ်လာစေခဲ့ ပါတယ် ။ မော်ရင်ဟို ရဲ့ ပေါ်တို ဟာ ၂၀၀၃ လောက်တုန်းက ဒရော့ဘာ ပါ၀င်တဲ့ မာဆေး နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ် ။ အဆိုပါပွဲအပြီးမှာ မော်ရင်ဟို ဟာ ဒရော့ဘာကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်ဖို့ အားအကိုးရဆုံး လူယုံကို စေလွှတ်ခဲ့ ပါတယ် ။
အဲ့ဒီလူကတော့ အန်ဒရီ ဗီလက်ပ် ဘိုအက်ရှ် ပါပဲ ။ ဘိုအက်ရှ် ဟာ ဒရော့ဘာ ကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့သလို တွေ့ဆုံမှုတွေပါ လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အသင်းပိုင်ရှင် ရုရှ သူကြွယ်ကြီးရဲ့ ခွင့်ပြုမှုနဲ့ အတူ ပေါင် ၂၄ သန်းဟာ မာဆေးရုံးခန်းက စားပွဲပေါ်ကို ရောက်ရှိလို့ လာခဲ့ပါတော့တယ် ။
“အဲ့တုန်းက အေဘရာမိုဗစ် ကျွန်တော့ကို မေးခဲ့တာကို မှတ်မိပါသေးတယ် ။ ဘယ်သူ ? တိုက်စစ်မှုး အတွက် ခင်ဗျား ခေါ်မှာ ဘယ်သူ ? ဆိုပြီး သူ ကျွန်တော့ကို မေးခဲ့ ပါတယ် ။ ဒရော့ဘာ လို့ ပြန်ဖြေတော့ သူ နားမလည်ခဲ့ပါဘူး ။ အဲ့တုန်းက ဥရောပမှာ ဒရော့ဘာ ထက်ပိုကျော်ကြားတဲ့ ထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှုးတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်”
“ဒရော့ဘာ က ဘယ်သူလဲ ၊ သူက ဘယ်မှာကစားနေတာလဲ လို့ အေဘရာမိုဗစ် ကျွန်တော့ကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ကျွန်တော် က မစ္စတာမိုဗစ် ၊ ပိုက်ဆံသာ ပေးစမ်းပါ ၊ စကားမများပါနဲ့ လို့ ပြန်ပြောခဲ့ ပါတယ် ။ အဟုတ် ဒီလို ပြောခဲ့တာပါ” လို့ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို က ဒရော့ဘာကို သူ ဘယ်လို ခေါ်ယူခဲ့သလဲ ဆိုတာ beIN Sport သတင်းဌာန ကို ဖွင့်ဟ ပြောဆိုခဲ့ဖူး ပါတယ် ။
အေဘရာမိုဗစ် နဲ့ မော်ရင်ဟို တို့ ၂ ဦးစလုံးဟာ ရုရှဘီလီယံနာရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်နဲ့ ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ ဒရော့ဘာကို လေဆိပ်ထိ သွားတွေ့ခဲ့ကြပါတယ် ။ စာချုပ်ချုပ်ဖို့ ရောက်လာတဲ့ ဒရော့ဘာကို မော်ရင်ဟိုက ပြင်သစ်လို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံး မိတ်ဆက် စကားပြောခဲ့ပါတယ် ။
“အဆင်ပြေရဲ့လား ဘော်ဒါကြီး ၊ မင်းဟာ ကစားသမားကောင်းပါ ။ ဒါပေမယ့် တကယ်ကြီးမြတ်တဲ့ ဘောလုံးသမားတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မင်း ငါ့ဆီမှာ ကစားဖို့ လိုလိမ့်မယ် ။ မာဆေး ဟာ တကယ်ကောင်းတဲ့ အသင်းပါ ။ ဒါပေမယ့် မင်း အနေနဲ့ ပိုကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီး ကြီးတဲ့ အသင်းမှာ ကစားဖို့လိုလိမ့်မယ် ၊ ချဲလ်ဆီးလိုပေါ့ ၊ မင်း ငါ့အတွက် ကစားပေးဖို့ လိုလိမ့်မယ်” လို့ မော်ရင်ဟိုက အိုင်ဗရီကိုစ့်သား ကို နှုတ်ခွန်းချွေခဲ့ ပါတယ် ။
တကယ်တမ်းမှာလည်း ဒရော့ဘာ ဟာ အားလုံး သိကြတဲ့အတိုင်း ချဲလ်ဆီးကနေ ဘုရင်ကြီး တစ်ပါးလို အောင်မြင်မှု တပွေ့တပိုက်နဲ့ လက်ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ။ အားလုံးဟာ ဒရော့ဘာကို ချစ်ခဲ့ကြပြီး ဖရန့် လမ်းပတ်ပြီးရင် ပရိသတ်အနှစ်သက်ဆုံး ကစားသမားဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါတွေကို ၂၀၀၄ ကတည်းက မော်ရင်ဟို ကြိုမြင်ခဲ့တာလား ? မော်ရင်ဟို ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြေပေးနိုင်မှာပါ . . . . . ။
ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည် . . .